လကုန်‌ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ချစ်သူက ရုတ်တရက် ဆုံးသွားလို့ ဘယ်တော့မှပြန်မရတော့မယ့်အမှတ်တရလေးတွေပြောပြကာ ၀မ်းနည်းပူဆွေး‌နေတဲ့ ရေမွန်ချစ်သူကောင်မလေ - Update News
June 24, 2021 June 24, 2021 - by Best_admin
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မနက်မှာအဆိုတော်ရေမွန်တစ်ယောက် အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်တဲ့ရောဂါကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါပြီနော်။ အစပိုင်းမှာတော့ ဦးနှောက်ထဲသို့ဌက်ဖျားပိုးဝင်တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေခဲ့ပေမယ့်လည်း နိုဗန်ထူးကတော့ သေချာတဲ့သတင်းအတိအကျကို ပြောပြလာတာပါနော်။ အဖိုးတန်လွန်းတဲ့အနုပညာသမားတစ်ဦး ကြွေလွင့်သွားခဲ့ရတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေကအရမ်းကို ဝမ်းနည်းနေကြတာပါနော်။ ဖခင်မေတ္တာငတ်မွတ်ခဲ့ရသူဖြစ်တာကြောင့်လည်း အကုန်လုံးက ကရုဏာသက်နေကြတာပါ။
သူ့ရဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်လည်း ရေမွန်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတောင် အတူရှိနေခွင့်မရခဲ့တာကြောင့် ဘယ် လိုမှ ဖြေမဆည်နိုင်အောင်ပါပဲနော်။ရေမွန်နဲ့ နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ screenshot ကိုလည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်တွင် တင်ထားပြီးအမှတ်တရတွေပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
သူမသွားခင်ကနဲ့ ဟိုရောက်သွားတဲ့ပုံ မဲသဲလာတဲ့ရည်းစားလေးကိုသနားလွန်းလို့ ဟိုရောက်တော့စားချိန်ထချိန်အကုန်မှန်တော့ ဖောင်းကားလာတာသူ့ကို အုန်းမဲလုံးလို့စရင် ကလေးနော်လို့ပြန်အော်တတ်သေးတာ ခုတော့မနက်ရုံးသွားရင် နှိုးပေးမဲ့ My Tiger 🐯💚 ဆိုတဲ့ contact ကလည်း အဝင်မရှိတော့ဘူး ကိုယ် အပြင်သွားရင် video call တွေခေါ်မဲ့ Tiger 8834 🐯💚 account ကလည်း အဝင် call မရှိတော့ဘူး Goodnight ဆိုပြီး cringe ဖြစ်စရာ Gif တွေလည်း မကြည့်ရတော့ဘူး
ဘဝမှာ Katherine Thann နဲ့မှ အချစ်ကိုသေချာသိတာပါဆိုပြီး အပိုတွေနဲ့အဖားမခံရတော့ဘူး ကိုယ့်ဘာသာကိုချော်လဲတာ ထိခိုက်မိတာတွေပြောပြရင် sorry babe ဥုံဖွနော်လို့ မကြားရတော့ဘူးကိုကိုက ဘဝမှာ cheat မလုပ်ဖူးတာဘေဘီ ၁ယောက်ထဲရှိတာတော့ ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါဆိုပြီး ကြွားတာတွေမကြားရတော့ဘူး ဘေဘီနဲ့ကြိုက်မှ ပေါင် ၁၃၀ ဖြစ်ဖူးတော့တယ်ပြောပြီး သူ့ထက် ၁လက်မနဲ့ ၁၀ ပေါင်ပိုတဲ့ကေ့ကို ကုန်းပိုးပွေ့ချီပြီးလျောက်မသွားတော့ဘူးကိုကို့ ကို rock concert ၃ပွဲလိုက်ပေးရင် ဘေဘီ့ကို EDM ၅ပွဲ ပြန်လိုက်ပေးမယ်
ဂုတ်ပေါ်လည်းတင်မယ်ဆို ခုတော့ဘယ်မှလည်းမသွားလိုက်ရဘူး Europe ဘက်ခရီးတွေထွက်မယ် ပိုက်ဆံစုကြမယ်သဲလေးဆိုပြီး ဘယ်မှလဲမရောက်လိုက်ဘူးတတ်တူးတိုးဖို့လုပ်ထားတာ သူမရှိလို့ပေးမထိုးပဲ “ကိုကိုက babe life ရဲ့ first tattoo ထိုးတာကို ဘေးကနေလက်လေးကိုင်ပြီး စောင့်ပေးချင်တာလေ” ဆိုပြီး ဂျီကျမခံရတော့ဘူးလကုန် ပြန်လာချင်လို့လာခေါ်ပေးပါဆိုပြီး စီစဥ်နေရာကလတောင်မကုန်သေးဘူး dead body နဲ့ပြန်လာမှာလား ဖုန်းထဲ gallery ကြည့်လိုက်ရင် သူနဲ့ပုံက ၄ပုံ၃ပုံ ခုထိလဲမယုံနိုင်သေးဘူး လက်လဲမခံပေးနိုင်သေးဘူး
” That’s not rumour. It’s true.He said he will love me till the end though i left him.But he’s the one who left me forever right now.I hope this is justanightmare which i can wake up tomorrow and everything’s back to normal.You said you wanted to marry me and we gonna live together so???Now you didn’t even say the last goodbye to me.You are loved and you will be missed, love of my life.စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့သာချန်ခဲ့ ” လို့ ရေးထားပါတယ်နော်။
Previous Article မြန်မာအရေးဆုံးဖြတ်ချက် UNတွင် အိမ်နီးချင်း၅နိုင်ငံ ကြားနေသဖြင့် NUG ကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရေး ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒများ စနစ်တကျပြန်ထားရှိမည်
Next Article ကတုတ်ကျင်းထဲက ဆေးမှူးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းမြည်သံ